Okufanele ukwenze nge ingane kusukela ngonyaka? Ongakwenza nengane yakho ekhaya ngonyaka?
Ngosuku lokuqala ukuzalwa komntwana - iholidi ukuthi ngabomvu bonke abazali abasha. Ngalesi sikhathi ingane isiqala ukuhamba, nesithakazelo konke emhlabeni futhi sinamandla kakhulu. Lesi yisikhathi omkhulu ekuthuthukiseni kanye nokufunda. Okufanele ukwenze nge ingane kusukela emnyakeni besemizini yabo? imidlalo ezemfundo eziphezulu kukho ezithakazelisayo kakhulu uyahlanganyela nendodana noma nendodakazi yakhe ngawe kulesi sihloko.
Nsuku zonke - okutholakele!
Chubby umfanyana ukukhombisa efulethini futhi ukuzijwayelanisa naye ezizungezile izinto zasekhaya Kunconywa kusukela zisencane. Kodwa nengane, uye usuku lokuzalwa walo wokuqala, izifundo ezinjalo mnandi. Amazwana yonke imisebenzi yakho yasekhaya, tshela ingane yakho ukuthi uzokubheka lokho abakwenzayo futhi kungani. Bonisa ezihlukahlukene, ezivame engaphandle ukufinyelela. Nikeza ingane yakho uthinte izincwadi omdala, omama izimonyo, abanye zokuhlobisa umhlobiso ingaphakathi. Yiqiniso, imidlalo enjalo kufanele kwenzeke ngaphansi kweso lomuntu omdala. Awazi ukuthi yini okumele uyenze nengane 1 nonyaka owodwa ubudala ekhaya? Khuthaza ingane yakho ukuba kabusha ukuhlola Igumbi ajwayelekile, cela lapho iwashi, lapho vase enhle noma umdwebo. Ungakwazi ngaphezu kwalokho usitshele kabanzi mayelana nokubonakala nezakhiwo izinto ezitholakele.
imidlalo Simple amathoyizi evamile
nursery ngamunye kukhona izibalo ngesimo izilwane nonodoli. Khuthaza ingane yakho ukuba ukukopisha imisebenzi evamile yasendlini in the game. Okuphakelayo teddy yakho bear futhi ubonise kanjani ukuba kuzamazame unodoli ngezingalo zakhe, noma ukugibela inqola. Futhi amathoyizi kungaba ageze, abulawe embhedeni, futhi ngezinye izikhathi uhambe welule izinyawo. Njengoba ingane ikhula lo mdlalo uzoba more xaka - eminyakeni 2-3 tingafundziswa ukudlala udokotela, esikoleni noma wezinwele. Kodwa uma ingane ingenandaba nezinto ukuba ngaphezulu izenzo eziyinkimbinkimbi zisencane - kufanele ukhuthaze futhi zanelise izithakazelo zakhe. Ngesikhathi lo mdlalo ungakwazi ukuthuthukisa izimfanelo ububele nomusa, ubabonise indlela yokuphatha izilwane. Uma ingane enza okuthile, akwamukelekile neze, isibonelo, ulibambe umsila ikati eyayigcwele noma uphonsa bunny elithambile, ukuchaza ukuthi awukwazi ukwenza kanjalo, ngoba ubuhlungu ithoyizi.
Ukukhetha amathoyizi kwesokudla
Ochwepheshe abaningi ekuthuthukiseni ingane bathi izinto lula imidlalo, ngakho ziwusizo. Ukuthenga noma cha ukuze kid yesimanje izikhungo zokuthuthukisa namathoyizi ezibizayo exhumana zomculo - lena lokuzikhethela lomzali ngamunye. Kodwa ukunikeza ingane izinto ezimbalwa ezidingekayo umdlalo olula amasethi kuyadingeka. Okufanele ukwenze nge ingane kusukela emnyakeni endlini futhi yini amathoyizi kumelwe nginazo? Thenga iqoqo cubes (kungaba soft) ngezithombe kukhanya noma izincwadi, sorter, onodoli, izimoto, nemabhola emasayizi lahlukene namabhuku enezithombe futhi inani elincane umbhalo. Ngilusizo njengoba isilwane imifanekiso yezinto zokudlala, puzzle enkulu nabaqambi. Zonke lezi zinto kufanele lubhalwe lezingane. Zingasetshenziswa ukufunda umbala, ijamo eyisisekelo Jomethri bese uqhathanisa izinga izinto ezahlukene kanye indlela yokwenza. Ukuze amathoyizi ukuthuthukiswa akubalwa uya esitolo - fun eziningi ezithakazelisayo futhi ewusizo kungenziwa kalula kwenziwe ngesandla ngezinto ezikhona iyiphi ekhaya.
Ngilusizo okuzenzela ukuthuthukiswa Early
amathoyizi Sikhungo kulula kakhulu ukuba enze futhi ngezandla zakhe. Zama ukwenza yezandla ewusizo okungenani kanye, futhi awusoze abe umbuzo ukuthi wenzeni ingane ngonyaka wedwa. Abathandwayo umdlalo - ekuthuthukiseni uzimele. Ukuze ukukhiqizwa kwayo kudingeka ngesisekelo amakhadibhodi noma plywood. Namathisela-ke izesekeli lokuthunga - Velcro, bensimbi, izinkinobho kanye eyelet, ubudala isicabha (uma ziphephile futhi akudingeki izingxenye ezincane), izinkinobho uguqule ukushintsha. Ungase futhi thunga futhi glue izingcezu ukwakheka okuhlukene lendwangu. Play nge luhlaka ilula - ingane uzozama unfasten uwafake zonke izakhi ukuthi uthinte ku ezihlukahlukene umsungulo futhi ukuthungwa ebusweni. Entsha ethintekayo emizweni ukuze sikhuthaze kwengane. Zama ukwenza izikhwama ezincane bese ugcwalisa nabo okusanhlamvu ezahlukene kanye nezinye fillers. Awazi ukuthi yini okumele uyenze nengane ngemva konyaka? Zama ukwenza sorter izandla elula. Thatha ibhokisi, unamathela kuso izithombe zezilwane ngibenze Slots endaweni umlomo. Kulezi izimbobo ingane bazothola "ukudla" - ubuhlalu ezinkulu noma zithutha of usayizi ofanele.
Ubuciko bamehlo for Kids
Ujwayelene umdwebo wengane kungaba ngemva lokuzalwa lokuqala. Thenga isamba elanele iphepha, ungakwazi ukuthenga ngisho flipcharts amaningi. Thenga amakhrayoni wax, umunwe upende nezinye izinto ephephile umsebenzi wokudala. Bonisa ingane yakho imidwebo elula - ilanga, izimbali zeJiyomethri nezilwane. Zinike nengane yakho ukudweba okuthile, makangabi kuqala uthola akuyona imigqa ngempela bushelelezi futhi ngokokudwebela, ngisho salo mdwebo kahle eba umcabango, emihle motor amakhono futhi silungiselela isandla uhlamvu. Awazi ukuthi yini wena okudingeka bazibandakanya ingane okwesikhathi zihamba ngonyaka? Thenga amakhrayoni ezimibalabala (for abancane kungcono ukuthatha usayizi esikhulu futhi ububanzi) bese uvumele ukudweba.
Lapho eneminyaka engu-unyaka 1 ingane endala ungathola lokujwayela amathekhiniki zokudala ezifana Appliqué futhi yokumodela. Khumbula ukuthi izingane ezincane ehudulwa emlonyeni, ngakho amakilasi nokusetshenziswa glue kumelwe ubumba labetibambile ngaphansi kokuqondisa abadala. Ukuze sculpting kungcono ukusebenzisa usawoti inhlama. It ingalungiswa ekhaya izingxenye alinganayo usawoti nofulawa, buhlanjululwe ngamanzi ukuze ukuvumelana oyifunayo noma ukulungele ukuthenga esitolo imikhiqizo ngobuciko. Lokhu kwaziswa kubhekwa ephephile kuka udaka futhi analogs yayo. Zama uyihlanganise izimo ezilula - "amasosishi", "amabhola", noma ukuvumela ingane nje bahlanganise inhlama. Okufanele ukwenze nge ingane kusukela ngonyaka, ngaphandle ukumodeliswa? Ungazama ukwenza appliqué Yiqiniso, iningi umsebenzi ziyokuwa emahlombe abazali, kodwa kid kuyinto isiqiniseko ukuba ukubukela ngesithakazelo nesithakazelo.
Izingane ezincane kunazo zonke bayakwazisa ukunakwa zabazali. Ukuze ukukhula obunobunye futhi enganeni ngokwanele ukuba imizi ngokuvamile esakhuluma nabo, smile at kubo. Ngokuvamile elula umunwe imidlalo ukuletha ingane kumnandi kuka ithoyizi yakamuva. Namuhla, abazali ahlinzekwa yonke ibhukwana incazelo ukunyakaza nemilolotelo ekusizeni umntwana nesithakazelo. Kodwa ungase futhi ukhumbule into kwasebusheni bami siqu. Imidlalo efana "Magpie", "Pussy, Shoo!" Ingabe lokhu akusikhona yini kancane ezithakazelisayo, naphezu kweqiniso lokuthi badlala ezingaphezu kweyodwa isizukulwane sabantwana. Awazi ukuthi yini okumele uyenze nengane ngonyaka - qiniseka uzame sizojabula kakhulu. Ngemva umunwe imidlalo kukhona akugcini nje ingane, kodwa futhi ukuthuthukisa amahle motor amakhono, futhi ngeso lengqondo.
Ukuvivinya umzimba - isihluthulelo ukuthuthukiswa avumelanayo ingane. Lapho eneminyaka engu-unyaka owodwa izingane athande ukudlala ibhola, ukubamba bese ufihle futhi bafune. Bonisa ingane yakho ngala amageyimu amahle kakhulu, futhi ngokuqinisekile ngeke ufuna ukudlala nabo nsuku zonke. Uma ulifunda njalo nkondlo bese ukutshela ingane, futhi kakade Uyazi ukuthi abanye babo bazama ukuveza indaba zakho ozithandayo ngezandla nokunyakaza. Enye ezithakazelisayo imidlalo for abancane - ukudlala ozithandayo inganekwane noma ingoma. Cela ingane yakho gxuma njengoba bunny umsila Wag njengoba impungushe, ufihle noma ubonise izilinganiso ukhuni izibambo. imizwelo eyakhayo evela lo mdlalo futhi qiniseka ukuze uthole kumntwana nakubazali bakhe.
Kanjani ukufunda amancane na?
Uthando izincwadi kufanele zifundiswe izingane kusukela ekuzalweni - Udokotela wengqondo. Khetha izindaba, izinkondlo kanye izindaba, ubudala olufanele wengane. Desirably, lezi zincwadi futhi umfanekiso agqamile ocacile. Futhi nangu umbhalo ukuba kakhulu akufanele kube kakhulu, ngoba ingane yakho evele akaqondi umlando omude kunothile isinyathelo nezinhlamvu. Emfushane, yezinganekwane elula, wena umane ukufunda, okuvumela ingane ukubheka isithombe, futhi ungakwazi ukukhuluma ngokukhululeka, ukugxila isithombe. Ucabanga ukuthi yini okumele uyenze nengane, kuba lula nokuningi ewusizo kakhulu? Khuthaza ingane yakho ukuba ufunde ndawonye - ake umama noma ubaba ofunda umbhalo, nezinyane lembuzi ifuna izinhlamvu ekhona esithombeni noma ukubonisa noma iyiphi imiphumela ekhethekile / nto ezingavamile eceleni encwadini imifanekiso.
Empeleni leli hholo lokuqala
Lapho eneminyaka engu-unyaka owodwa, ingane ingakha kakade ayejwayele ubuciko ezigcawugcawu. Okokuqala, wena umane uzame ukudlala izindaba ajwayelekile inganekwane ingane amathoyizi atholakalayo. "Gingerbread Man", "Speckled Hen" futhi "itheniphu" - misebenzi ungenza kalula. Unentshisekelo ingane nokudlala ngonodoli, amagilavu. Ungazama ukwenza yaseshashalazini kanye ithebula ngezandla zabo, ezenziwe iphepha izibalo noma zihlanganise kusuka ezilahliwe. Okufanele ukwenze nengane onyakeni? Qiniseka ukuthi udlale ngayo ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Ungase futhi ukudlala ngokukhethekile umntwana tale ujwayelene indaba "okungalungile". Vumela isinkwa uzohlangana phakathi nohambo lwakhe indlovu noma kangaroo, hhayi owawuhlala futhi impisi. Zama ukuba banake lo mntwana, inganekwane ukuthi kukhona iphutha, futhi ucele ngimthole.
Game imizuzu 5: ukuthi benzeni ingane ekhaya?
Ngisho umama wemfanelo kakhulu futhi nomdlandla bokukhulisa umntwana ngezikhathi siyaba naso isidingo kwamaminithi ambalwa ingane wayematasa abanye into ezithakazelisayo futhi ewusizo uma nje ilawulwa endlini. Yini imidlalo kuzosiza ugqozi izinyane ezingaphansi kweminyaka engu-unyaka owodwa? Nikeza ingane yakho into engaziwa noma okungajwayelekile, kodwa kuphephile yini kuye. A option enhle - a inqwaba yomagazini ubudala, ifolda obukhulu noma incwadi enkulu ngemifanekiso. Ngisho noma likhiphe - akunankinga: udoti angasuswa, kepha ingane imatasa ewusizo. Buza noma uchwepheshe ukuthi wenzeni ingane ngonyaka sokuthuthukiswa emihle motor amakhono, futhi cishe wazi ukunikeza ingane yakho isikhathi esiningi ezandleni iphepha, amathoyizi encane, zehlukene ukuthungwa. Yenza ingane "ibhokisi engcebweni" - thatha ibhokisi elincane, kuyinto efiselekayo ukuhlukanisa izigaba. Songa it in amatshe kolwandle, zasolwandle (emikhulu) nezinye ezithakazelisayo, kodwa izinto kancane ephephile. Lokhu mdlalo kwenzeka ukuthi umama kumele ukupheka ukudla kwakusihlwa noma ukwenza yokuhlanza, futhi zingabuka ingane, kodwa akudingeki ukuba mathupha iqhaza emdlalweni.
Okufanele ukwenze nengane kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili sishaywe?
ukuchayeka Daily emoyeni evulekile kumele ngempela ungene ukuphila kwansuku zonke ingane enempilo. Phakathi uhambo, awukwazi kuphela fun, kodwa futhi ukufunda okuthile okusha. Cela ingane yakho play in the Sandbox noma zimba iqhwa. Futhi, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka emhlabathini, ungakwazi ukufinyelela kwesakho ngomshiza, futhi entwasahlobo ngosizo ithuluzi efanayo - ukukala ka amaxhaphozi ukujula. Zama ukuvakashela izindawo ezahlukene, sinake ingane indlela ukuguquka kwezinkathi zonyaka. Futhi khumbula ukuthi zonke uhambo - lena adventure real ngomntwana, yayinesithakazelo konke - kusuka ikati noma inja yagijimela icula, izimoto amasignali nezinye imisindo emgwaqweni.
Okufanele ukwenze nengane (iminyaka 1.5) emgwaqweni? Ungabi lazy ukuthatha ubudala obufanelekile amathoyizi kwesizini. Kits umdlalo isihlabathi, iqhwa lokwela, kweqa, amabhola - okuningi ongakhetha nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ucabanga ukuthi yini ongayenza nengane yakho? 1 unyaka - isikhathi ephelele ukuhlola lembuzi imphilo yesive. Zama ukwehlisa Uyayobayobeka e-zoo, ipaki noma enye indawo lapho amahle ezithakazelisayo. Lapho ngineminyaka engu-efanayo, ungaqala ukuvakashela cafe yezingane, noma ngisho okuthile okunjengesitsha ukuthuthukiswa isikhungo izingane.
Ukwenza kube mnandi: indlu izingane kuleli zwe
Ezinyangeni 8 ukuthi ingane kumele akwazi? Ikhalenda ukuthuthukiswa e izinyanga 8
League of Legends, Hyde. Galio, elusizi yayenza umuntu umnakekeli - umhlahlandlela hero
Kuyini professional izinwele yensimbi izinwele eqondisa kangcono - BaByliss PRO Nano Titanium noma GA.MA? Ukubuyekeza, izithombe
Aluhlaza okwesibhakabhaka phakathi nokukhulelwa kanye lactation
Bartholinitis: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa